BỊAFRA ADỊWO NSỌ-ASARI DỌKỤBỌ
Pọt Haakọt: Alahaji Asarị Dọkụbọ, onye ndu otu ọlụọ ọlaa Niger Delta Peoples Volunteer Force (NDPVF) ekwuola hoo!haa! na ọbịbịa mba Biafra adịwo nso. O kwuru nkea n’okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ụnyahụ na Pọt Haakọt. Nwoke a bụbu onye ọ lụọ ọ laa sịrị na nkea bụ makaRead More →
KATSỊNA:GỌỌMENTI NA NDỊ NTỌ ENWEELA ỌGBAKỌ
Katsina: Gọvanọ Katsina Steeti, Alahaji Aminu Bello Masari, nọrọ ụbọchị Tọọzdee nwee ọgbakọ n’etiti ya na ndị ekperime na-awakpo ndị mmadụ n’Okpuru Ọchịchị asatọ nọ na steeti ahụ iji kwụsị ntọrị na steeti ahụ. Ndị ọzọ nọ n’ọgbakọ ahụ gụnyere ndị isi ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche na steetiRead More →
“AGHA KA Ị CHỌRỌ” SHEKARAU GWARA WIKE
Kano: Gọvanọ chịburu Kano Steeti, Mallam Ibrahim Shekarau agwala Gọvanọ Ezenwọ Nyesom Wike nke Rivas Steeti na ọ bụ agha ka ọ chọrọ maka itikpọ ụlọ ekpere ndị Alakụba na Pọt Haakọt. Shekarau kwuru nkea n’ụtụtụ taa bụ Fraịdee ka ọ na-akatọ ntikpọ Gọọmenti Rivas Steeti tikpọrọ ụlọ ekpere ndịRead More →
NDỊ AKPỤ OBI ROCHAS GBARA M EGBE, Ọ NAGHỊ ESHI-NDỤBỤAKỤ
Owere: Ichie Jaspa Ndụbụakụ, Onyeisi oche otu aka ọkụ Gọọmenti Imo Steeti guzobere maka Mweghachi Akụnụba Gọọmenti steeti ahụ ka ndị akpụ obi tiri eti eti, gbaa egbe ma gbukwaa mma ugboro ugboro. Nkea kpọtụrụ ụnyahụ bụ Tọọzdee n’Owere oge nwoke a kajara aka duuru ndị otu ya ndị sikwaraRead More →
GWANỤ PHYNO NA OWU ASAGBUO M-EJIMA PHYNO
Phyno, odogwu na eti egwu, ezigbo aha ya bụ Chibụzọ Azụbụike ka ejima ya rịọrọ ka ọ gbatara ya ọsọ enyemaka ma “tinyekwa ya n’ihe a na-eme” Ejima ya nkea aha ya bụ Nnọlị Ụzọdịmma bụ onye Ojoto dị n’Okpuru Ọchịchị Ndịda Idemili n’Anambara Steeti. Ọ bụkwa onye nche ogbe(vigilante)Read More →
MMIRI ERIWO ONYE NJENJE CHỌRỌ ÍSÌ FRANS GWUFEE BRITEENỤ
Beljiọm: E butewo ozu otu nwoke onye mba Ịrak, onye chọrọ igwuru mmiri osimiri si Frans banye Briteenụ ụnyahụ n’ikpere mmiri Zeebrugge dị na mba Beljiọm. Nwoke ahụ dị iri afọ anọ n’asatọ ka a sị yiri uwe ìsè na mmiri (life jacket) nke o jiri kom kom plastiki rụtaRead More →
EWETAWORO ENUGWU KỌMISHỌNA NDỊ UWE OJII A CHỤRỤ NA KADUNA
Enugwu: Ewepuwo Kọmishọna ndị Uwe Ojii Enugwu Steeti bụ Suleiman Balarabe. Nkea bụ maka mkpesa si n’aka ọtụtụ ndịsonwere Steeti ahụ, na ya bụ nwoke enweghị ihe ọ na-eme maka ọnọdụ enweghị ezi nchekwa dị na steeti ahụ. Otu jikọtara ụmụ akwụkwọ bụ National Association of Nigerian Students (NANS) ngalabaRead More →
NTIKPỌ ỤLỌ EKPERE ALAKỤBA, AKA M ADỊGHỊ YA-WIKE
… Onye tikpọzịrị? Pọt Haakọt: N’abalị iri abụọ nke ọnwa Ọgọọst, ka e tikporo ụlọ ekpere Alakụba dị na Rainbow na mpaghara Trans-Amadi nke ndị Alakụba na Rivas Steeti na-ekwu na-aka Gọọmenti Steeti ahụ dị na ya. N’agbanyeghị na Gọọmenti Steeti ahụ sịrị na ihe ahụ akụkọ asị, ụfọdụ gakwaraRead More →
NDỊ UWE OJII NA-ATỌHAPỤ NDỊ NTỌ NDỊ FULANI MA HA GOSIPỤTACHAA HA-HURIWA
… Sọọsọ Mazị Ivans ka a kpụpụworo ụlọ ikpe Abụja: Otu na-ahụ maka ikike dịịrị mmadụ a na-akpọ Human Rights Writers Association of Nigeria, HURIWA, ekwuola na ndi uwe ojii Naịjiriya nọ sọọsọ na-egosipụta ndị ekperime ndị Fulani ha jidere n’achọghị ịkpụpụ ha ụlọ ikpe. N’ozi nke Ịmanuel Ọnwụbiko, OnyeRead More →
NKESA USORO NCHEKWA GA-AKWALITE ỌRỤ NCHEKWA-EKWEREMADU
Enugwu: Onye jibụ ọkwa dịka Osote Onyeisi Sineti Naịjiriya, Sinetọ Ike Ekweremadu ekwuola na sọọsọ nkesa usoro nchekwa bụ ọgwụ dịịrị nsogbu nchekwa na Naịjiriya. Ike Ekweremadu kwuru nkea ụnyahụ, oge ndị otu ụmụ nwanyị bụ ndị nta akụkọ bụ Nigeria Association of Women Journalist (NAWOJ), ngalaba Enugwu Steeti bịaraRead More →
BOBRISKY BỤ NSOGBU DỊỊRỊ NAỊJIRIYA – RUNSEWE
Gọọmenti Etiti Naịjiriya azọọla mbá imesi Ome ka Nwanyị, Okuneye Idris Olarenwaju, onye a maara dị ka Bobrisky ike. Onye Nlekọta Ukwu, ụlọ ọrụ National Council for Arts and Culture, Otunba Olusegun Runsewe, kwuru nkea n’okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ụnyahụ “Bobrisky bụ ihere dịịrị ala anyị. O jiriRead More →
BB NAIJA RỤRỤ ARỤ – RUNSEWE
Otunba Olusegun Runsewe Onye Nlekọta ukwu nke ụlọ ọrụ National Council for Arts and Culture, ekwuwo na mmemme ‘Big Brother Naiija Reality Show’ na-anata iwe Gọọmenti Etiti n’oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na ndị nhazi ya agbanweghị ihe a na-eme n’ime ya. Runsewe gwara ndị nta akụkọ ụnyahụ naRead More →
ASABA:AKA AKPARALA ONYE OHI IGWE ỌKỤ ‘GENERATOR’
Asaba: Otu nwokorọbia dị iri n’itolu ka aka kpara n’ụtụtụ taa n’Asana maka izu ohi ígwè ọkụ (generator). Nke a mere na Ụzọnta (Drive) Pita Ofuose dị n’ụzọ Infant Jesus n’Asaba. Ozi hoo!haa!! nwetara bụ na nke abụghị mbụ onye omekome a na ndị otu ya na-ezu ígwè ọkụ ndịRead More →
‘ENERGY SAVING BULB’ NA-EBUTE ỌRỊA CANCER -DỌKỊNTA ỌCHỌNỌGỌ
Legọs: Ọkachamara n’okwu banyere mkpofu ngwa latrik abaghịzị uru, Dọkịnta Ifeanyị Ọchọnọgọ enyela ụmụ amaala Naịjiriya ịdọ aka ná ntị banyere iji (usage) nakwa mkpofu bọlbụ latrik ọgbara ọhụrụ ‘Energy Saving bulb’. O kwuru na mmiri mmụọ ( chemical ) na-ebute ọrịa cancer nke nọ ya n’ime. N’okwu ọ gwaraRead More →
OZI IPOB GBOCHIRI EKWEREMADU IGỤPỤTA BỤ OZI ‘AKỤ RUO ỤLỌ’
Ike Ekweremadu wetaara ndị Igbo bi Jamani ozi “akụ ruo ụlọ” na mmemme Iri Ji Nuremberg mana mwakpo ndị IPOB ekweghịzị ka ọ gụpụtara ha ozi ahụ. Nkea bụ ozi hoo!haa!! nwetara site na nnyocha ya. Akụ ruo Ụlọ bụ atụmatụ otu Ohaneze Ndigbo na-ekwusa dịka oziọma iji mee kaRead More →
ENUGWU:OMENKA ABEL NWOBODO AJỤLA ỊBỤ KỌMISHỌNA
Enugwu: Omenka Abel Uchenna Nwobodo, onye ndịsonwere Okpuru Ọchịchị Nkanụ mpaghara Ọwụwa Anyanwụ wepụtara ka e mee kọmishọna ajụla ya bụ ọkwa. Nwoke a bụbu Onye Ndụmọdụ Gọvanọ n’okwu banyere ọrụ kwuru ihe mere o ji mee otu ahụ dị ya n’obi. Kaosiladi, ozi hoo!haa!! nwetara bụ na Hon. PeaceRead More →
IPOB GA-ANWỤCHIKỌ BUHARỊ, MA Ọ GBA ỤKWỤ NA JAPAN-NNAMDỊ KANỤ
Ka a na-eti mkpu mwakpo ndị IPOB wakporo onye jibu ọkwa dịka Osote Onyeisi Ụlọ Nzukọ Sineti Naịjiriya, Sinetọ Ike Ekweremadu na Nuremberg, mba Jamani, onye ndu IPOB, Mazị Nnamdị Kanụ enyekwala ụmụazụ ya ntuziaka ịwakpo ma nwụchikọọ Onyeisiala Naịjiriya bụ Muhammadu Buhari na njem ọ na-abịa na mba Japan.Read More →
ENUGWU:NGOSIPỤTA AKWỤKWỌ POLO MALL AMALITEWO
Enugu: Ngosipụta akwụkwọ Polo Mall, Enugwu na-aga n’ihu ugbua n’ogige Polo Mall (Polo Park), GRA, Enugwu. Site n’okwu Mazị Uche Anịoke, otu onye n’ime ndị nhazi ya bụ ngosipụta akwụkwọ ahụ, nke a bụ nke anọ a na-eme ya bụ mmemme. Anịoke bụ onye ọrụ mbipụta akwụkwọ (publisher) a maraRead More →
ARỤ! NWANYỊ EJIRILA KOBOKO PỊAGBUO NWA YA DỊ AFỌ ANỌ
Akure: Arụ mere ụbọchị Wenezdee bụ abalị iri abụọ n’otu nke ọnwa Ọgọọst mgbe otu nwanyị jiri koboko were pịagbuo nwa ya nwanyị dị afọ anọ. Site n’ozi ndị nta akụkọ anyị nwetara, nwanyị ahụ ku nwa ya ahụ gbata n’ụlọ ọgwụ mgbakwunye (annex) nke Mahadum Ondo Steeti dị n’Akure,Read More →
ENUGWU:FULANI EGBUOLA MA BỌWAA AFỌ NWANYỊ DỊ IME
Enugwu: Ndi nchị ehi Fulani anyịwo. A na-ekwu ha arụ ha kpaburu ha darakwa nwanyị dị ime gbuo n’ụtụtụ a n’Enugwu, bewaa ya afọ wepụ nwa o bu n’afọ. Nkea na-eme ka ndị Gọvanọ mpaghara Ọwụwa Anyanwụ ka degachara onyeisiala Muhammadu Buhari akwụkwọ ozi iji nye mkpesa maka mkpa mkpaRead More →